Uyini umuthi, wenziwa kanjani futhi iyini imiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | | Izimo zezulu, Iziphepho
Ukuguquka kwesimo sezulu kubangela ukwanda kukho konke okwenzekayo nobuningi bezimo zezulu zebanga elingavamile. Lokhu kusho ukuthi izehlakalo ezahlukahlukene ezifana neziphepho neziphepho zizokwenzeka ngesilinganiso esikhulu esizodala izinhlekelele, isomiso esinesikhathi eside nezikhukhula ezinomthelela omkhulu. Namuhla sizokhuluma ngokuthi yini a okwelapha nokuthi yakhiwa kuphi. Kuyisiphepho-mbumbulu esakha oLwandle iMedithera futhi sibheke eGrisi.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokuthi uyini umuthi nokuthi uzoba namiphi imiphumela.
1 Yini umuthi
2 Imicimbi yesimo sezulu esibi kakhulu
3 Izimo zokuqeqeshwa kwe-Medicane
4 Sakhiwa kanjani isiphepho
Igama elithi medicane livela esiNgisini iMedithera yesiNgisi. Kusho isiphepho saseMedithera. Kodwa-ke, akusona isiphepho uqobo, kepha sisengaba nemiphumela efanayo kakhulu. Isikhathi sokwindla yisona esifanele ukwakheka kwabo ngoba kunezimo ezikahle zemvelo ukuze lokhu kwenzeke.
IGrisi yilona elihlose ukwelashwa futhi lilungiselela ukuthola amandla esiphepho esishisayo esizokwenza imali eziqhingini ezisentshonalanga ne-Ionia. Lesi siphepho sibhabhadiswa ngegama lika-Ianos futhi sibonakala kakhulu ngokuba nemimoya enamandla yesiphepho kanye nemvula enamandla engadala ukwakheka kwezikhukhula. Ijubane lomoya lingadala ukunqamuka kukagesi ezindaweni ezithile lapho kunamandla khona imimoya. Ezinye izivunguvungu zomoya ezinamandla futhi ezilindelwe zizoba nesivinini esingu-200 km / h. Mayelana nemvula, inani eliphakathi kwamalitha angama-200 kuya kwangama-400 ngemitha eyisikwele ngalinye kulindeleke emahoreni ambalwa.
Okufanelekile, abantu abasondelene nemifula nemifudlana kufanele bafune enye indawo yokuhlala ukuze bagweme ukuhlupheka ngemiphumela yezikhukhula. Ngakolunye uhlangothi, ezinye izakhamizi kufanele zikhawulele uhambo olungadingekile ukugwema ukudala izingozi ezinkulu. Umuthi i-Ianos uthathwa njengesiphepho esishisayo futhi ufana nesiphepho. Noma kunjalo, inamandla, isandiso nobude obufana nesiphepho sangempela. Yize ososayensi bezama ukubikezela ngangokunokwenzeka imiphumela enamandla okuzoba nayo, inkambo yalo mjikelezo ayinakubikezelwa ngokunemba okuphelele.
Imicimbi yesimo sezulu esibi kakhulu
Njengoba sishilo izindatshana eziningi, imvamisa kanye nokuqina kwezimo ezinobubanzi obungavamile kuzoba njalo kakhulu. ngenxa yemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. Ukuze kube nesiphepho, kudingeka amanzi asezindaweni ezishisayo ukuze ukukhiqizwa kwamanzi kube phezulu kakhulu futhi kwenzeka ekwakhekeni kwalezi ziphepho ekwakheni amafu. Ukwanda kwamazinga okushisa oLwandle iMedithera kubangelwa ikakhulu ukufudumala komhlaba. Lokhu kwanda kwamazinga okushisa aphakathi komhlaba kuzodala ukwehluka kwesimo sezulu. Nakhu ukuthi inani elikhulu kakhulu lezimo zezulu ezimbi ngokwedlulele liyokwakhiwa futhi ngamandla amakhulu kunendlela esiyijwayele.
Akukhona okokuqala ukuthi kube khona owelapha kule ndawo. Ngo-1995 lezi ziphepho zavela okokuqala eGrisi. Kodwa-ke, kuyaziwa ukuthi ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu lezi zimo zezulu seziye zanda kakhulu eminyakeni yamuva. Esinye isivunguvungu esifanayo sahlasela iGrisi ngonyaka ka-2018. Izikhukhula zazibonakala lapha, zabulala abantu abangu-25 zashiya amakhulu engenamakhaya. Iziphepho zibizwa ngokuthi zingumuthi wezokwelapha ngoba sifushane ngesiphepho saseMedithera.
Ianos kulindeleke ukuthi ishaye ngamagagasi amabili. Eyokuqala imvamisa inamandla kakhulu lapha, iza ilayishwe umswakama. Okwesibili kungafana nokuzamazama komhlaba okulandelayo. Izifunda eziyisikhombisa ezisentshonalanga yeGreece yilezo eziye zaxwayiswa kakhulu ngaphambi kwesiphepho. Iziphathimandla ezinquma kamuva ngaphandle kokuxwayisa isifunda esibanzi sase-Athene, i-Attica kanye neKorinte.
Izimo zokuqeqeshwa kwe-Medicane
Ukuze kutholakale uhlobo lwesiphepho esishisayo, kudingeka ulwandle olunamazinga aphansi okushefa kanye nendawo enomswakama. Siyazi ukuthi uLwandle iMedithera, olunikezwe ububanzi balo kanye nemvelo yalo, alulona ulwandle oluhlangabezana nezimo zokwakheka kwalolu hlobo lwesimo sezulu. Kodwa-ke, uma kwenzeka ezinye izimo, ikakhulukazi ngalesi sikhathi sonyaka, le mibandela edingekayo yokwakhiwa kwesiphepho esingaphansi komhlaba inganikezwa. Lezi ziphepho ziwuhlobo lwama nzalo phakathi kweziphepho ezishisayo nezingezona ezasezindaweni ezishisayo.
Endabeni ka-Ianos kukhona iphakethe elibuthakathaka lomoya obandayo ekuphakameni. Njengoba kune-orography engaphezulu, le mibandela ikwazile ukusetshenziselwa ukuqala inqubo ye-convection. Ngenqubo yokudlulisa, ukwakheka kwesiphepho kuyenzeka okuthola izici zesiphepho esishisayo. Sishilo ngaphambili, Akukhona okokuqala ukuthi kube neziphepho zalolu hlobo ezakha kule ndawo. Zivame ukukhiqizwa ngokwesilinganiso se-1 noma 2 ngonyaka futhi zivame ukubizwa ngokuthi yimithi yokwelapha.
Ngokuya ngamandla nokuqeqeshwa kwe-Ianos, lokhu kuzoba ngumuthi okhethekile.
Sakhiwa kanjani isiphepho
Ukuze kube nesiphepho, kufanele kube nenqwaba yomoya ofudumele futhi oswakeme (imvamisa umoya wasezindaweni ezishisayo unalezi zici). Lo moya ofudumele futhi oswakeme usetshenziswa yisiphepho njengophethiloli, ukusuka lapho kuya kulokho akhiwa khona, ngokujwayelekile, eduze ne-Equator.
Umoya uphuma ebusweni bezilwandle, ushiye indawo ephansi kakhulu inomoya omncane. Lokhu kudala indawo yengcindezi ephansi yasemkhathini eduze nolwandle, ngoba kunomoya omncane ngeyunithi yevolumu ngayinye.
Ekujikelezeni komoya emhlabeni jikelele, izindimbane zomoya zisuka lapho kunomoya omningi ziye lapho kuncane, okusho ukuthi, zisuka ezindaweni ezinengcindezi ephezulu ziye phansi. Lapho umoya ozungeze indawo eshiywe unengcindezi ephansi uhamba ukugcwalisa leso "sikhala", ubuye ushise futhi uvuke. Njengoba umoya ofudumele uqhubeka ukhuphuka, umoya ozungezile uzungeza uthathe indawo yawo. Lapho umoya okhuphukayo uphola phansi, ube umswakama wakha amafu. Njengoba lo mjikelezo uqhubeka, lonke ifu nomoya womoya uzungeza futhi ukhule, uphehlwa ukushisa kolwandle namanzi ahwamuka ebusweni.
Zonke lezi zimo zemvelo zenza imbangela yokufudumala kwesimo sezulu emhlabeni jikelele.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi yini i-medicane nokuthi iyini imiphumela yayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Imithi